Manchester United iyo Liverpool oo bar bar dhac ku heshiiyey iyo Arsenal oo guul Muhiim ah gaartay. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Manchester United iyo Liverpool oo bar bar dhac ku heshiiyey iyo Arsenal oo guul Muhiim ah gaartay.
Axad, Feberaayo, 24, 2019 (HNN)- Waxaa soo dhamaaday kulan ciyaareedkii u dhaxeyey kooxaha Manchester united iyo Liverpool kaas ooa haa kulan aad u xiiso badan oo lawada sugayey , waxa uuna ku soo dhamaaday bar baro 0-0.
Labada koox ayaa garoonka ku soo galay safkoodii ugu adkaa waxa ayna ayaan daro ay ku habsatay kooxda Manchester oo badalkeedii dhameesatay qeebtii koowaad ee ciyaartaba kaddib markii ay ka dhaawacmeen sedex xidig oo muhuum ah qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Xidigaha dhalasha wadaaga ah ee Juan Mataiyo Ander Herrera ayaa dhaawac ciyaarta lowgu saaray xili Lingard oo badal ku soo galay ciyaarta qeebtii koowaad markale ciyaarta laga saaray .
Liverpool dhankeeda waxaa ka dhaawacmay weeraryahankooda Fermino kaas oo isna badal lagu sameeyey qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Afar daqiio oo dheeri ah oo lagu daray ciyaarta qeebtii koowaad ayaa ugu dambbeen ku soo idlaatay bareejo , ciyaartoyda ayaan u huleelay qolka labiska si ay us oo qaataan nasiino iyo talooyin wax ku ool ah .
Waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta , kulankii dhaawaca u saxiibka noqday ayaa halkiisa laga sii anba qaaday.
Qeybta labaad ee ciyaarta ayaa isla qeybtii hore oo kale wax gool ah la iska dhalin waayay inkastoo ay Manchester United heshay fursado khatar ah oo gool loo filan karay..
Lingard ayaa helay qeybta hore ee kulanka fursad cajiib ah oo uu siiyay Lukaku balse wuxuu isku dayay inuu goolhaya u gooyo oo waa laga diiday, dhammaadka ciyaarta ayaa sidoo kale Man United waxaa fursad wayn ka khasaariyay Smalling.
Natiijada kulanka waxaa aad ugu qanacsan Man City oo Liverpool kula tartameysa horyaalka Premier league xili ciyaareedkan.
Dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa guul sahlan ka gaartay kooxda Southampton kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League , Arsenal ayaana la timid laboo gool qeebtii koowaad ee ciyaartaba .
Arsenala ayaa labada gool ka heshay xidigeheeda kala ah Alexandre Lacazette oo dhaliyey goolka hore daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta ,daqiiqado kaddib waxaa yimid goolkii labaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey Henrikh Mkhitaryan daqiiqadii 17-aad ee ciyaarta .
qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Southampton ayaa awoodi weysay in ay iska soo aar gudaan deentii labada gool halka Arsenal ay ku fashilantay in ay helaan gool sedaxaad ,.
ugu dambeen ciyaarta ayaa kus oo dhamaatay 2-0 oo ay guushu ku raacday kooxda Arsenal oo dib ugu soo laabatay afarta sare .
Manchester United iyo Liverpool oo bar bar dhac ku heshiiyey iyo Arsenal oo guul Muhiim ah gaartay. added by admin on February 24, 2019